VTSR: Mivondrona ao avokoa na ny mpanohana na ny mpanohitra ny fitondrana.
ACTUALITE/ Divertissement/ Politique
Nanambatra ny heriny ny mpanao politika mpanohana sy mpanohitra ny fitondrana ary ireo tsy miandany nq amin’iza na iza. Mivondrona ao anatin’ny vovonana VTSR na vovonana Tsimialonjafy Miaro ny Soatoavina Repoblikana izy ireo mba hamporisika ny mpitondra sy handresy lahatra ny vahoaka fa ny fifandimbiasam-pahefana amn’ny alalan’ny fifidianana ihany no ahafahana mampandroso ny firenena fa tsy amin’ny alalan’ny korontana sy fanimban-javatra.
Tsy miaro ny mpitondra manao ny tsy mety. “Tsy vao izao no nanjaka ny kolikoly eo anivon’ny fitondram-panjakana fa efa tarazo nolovaina tamin’ny fitondrana nifandimby teo aloha”, hoy i Olivier Landry RABE, mpanao politika manohana ny fitondram-panjakana. Tsy andraikitry ny Filoham-pirenena ihany no manadio izany fa manana adidy lehibe amin’izany ihany koa ny hery velona rehetra. Nanamafy ny tenany fa efa manomboka manadio ireo manapotika ny fitondrana ka mihatra hatrany amin’ny firenena ny Filoham-pirenena (PRM). Ao anatin’ny vinan’ny vovonana ny tsy fiarovana ny tomponandraikitra manao tsy mety. Noho izany, mamporisika ny PRM ny VTSR hanohy izany hatrany.
Fanorenana Ifotony. “Raha tiana ny hampandroso an’i Madagasikara, mila miroso amin’ny dingan’ny fampihavanam-pirenena”, hoy Raharinaivo ANDRIANATOANDRO. Ny fifampidinihana miaraka amin’ny Filoham-pirenena sy ny hery velona rehetra toy ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny vahoaka no tokony hatao hijerena ny fototry ny olana tsy mampandroso ny firenena ary amin’ny alalan’izany no handrafetana ny fandaharan’asa hampiroboroboana ny sehatra rehetra.
‹ SECOURS ISLAMIQUE FRANCE : Des travaux d’assainissements pour assurer le fonctionnement des canaux d’évacuations.	› GDS: Hetsika maro no atao ho fampandrosoana ny faritra Atsimo.